Kenya: Soomaali farabadan oo maxkamada kasoo muuqday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mombasa – Mareeg.com: Iilaa 90 qof oo Soomaali ah oo ay ku jiraan haween iyo carruur ayaa Talaadadii shalay la soo taagay maxkamad ku taalla magaalo yar oo ku taalla gobolka xeebta leh ee Kenya.
Maxkamadda magaalada Kwale ayaa ku eedeysay dadka inaanay haysan dukumeentiyo sharci ah oo lagu joogi karo Kenya.
Maxkamadda ayaa sii deysay 43 carruur ah oo ka mid ahaa dadka la xiray, halka 21 kale ay beeniyeen eedda loo jeediyay, waxaana lagu hayn doonaa xabsiga ilaa 2-da May, xilligaas oo dacwaddooda la dhageysan doono.
Inta hartay ayaa qirtay eedda loo jeediyay, waxayna maxkamadda ku ganaaxday in mid kasta oo ayaga ka mid ah uu bixiyo lacag dhan Ksh 40,000 ama inay galaan xabsi 6 bilood ah kaddibna loo masaafuriyo dalkooda.
Qareen u doodayay dadka Soomaalida ah oo lagu magacaabo Daudi Abdul ayaa sheegay in qaar ka tirsan dadka ay haystaan dukumeentiyo sharci ah.
Dalka Kenya, waxa kusoo laalaabta Soomaalida loo heyso eedo kala gedisan, iyadoo qaarkoo loo xiro ineysan sharci heysan, halka qaar kale oo xiro arrimo la xiriira waxa loogu yeero argagixiasada.
Madaxweyne Xasan iyo wakiilada caalamka oo ka shiray dagaalka ka dhanka ah Alshabaab